न्यायको आस, हामीलाई पनि मारिदेऊ सरकार ! – Rajdhani Daily
न्यायको आस, हामीलाई पनि मारिदेऊ सरकार !
सुरेश पन्त/काठमाडौं ।
छोरी निर्मला पन्तको हत्या भएको खबर पाएको शव देखेको अवस्था स्मरण गर्दै बिहीबार बाबु यज्ञराज पन्तका आँखा रसाउन छाडेनन्, उनी भक्कानिएको दृश्यले पत्रकार नै मार्मिक भए । सनी खुनाको ज्यान जानेगरी भएको राज्यको दमन र एक जनाको खुट्टै काट्नेगरी भएको आन्दोलनतिर फर्किंदै उनले भने, ‘न्याय माग्दा सजाय पाइन्छ भने सरकार न्याय चाहिएन हामीलाई पनि गोली ठोकेर मारिदेऊ !’
आमा दुर्गा पन्तले त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नामै लिएर भनिन्, ‘तपाईंकी पनि छोरी छन् तर अन्याय निर्मलालाई मात्र किन ? राष्ट्राध्यक्ष महिला हुँदा छोरीको न्यायमा तपाईं किन चुप ?’ उनीहरूले संयुक्त रूपमा भने, ‘हामी न्यायको आशमा राजधानी आएका हौं, न्याय नपाएसम्म जानेछैनौं ।’ निर्मलाको आत्माको शान्ति र न्यायको माग गर्दै बाबुआमासँगै अधिकारकर्मीले साँझ माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन पनि गरे । यज्ञराजले त्यहाँ पनि आँशु थाम्न सकेनन् ।
बुधबार राजधानी आइपुगेका निर्मलाका बाबुआमा र कञ्चनपुरका महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट र उनी मातहतका प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमै प्रमाणहरू नष्ट गरेको देखिन्छ । प्रमाण नष्ट गर्न भूमिका खेलेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरेर कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा निर्मलाका बुबाआमा र यज्ञराजले अपराध लुकाउन खोज्ने प्रहरीहरू खुलेआम हिँडिरहेको भन्दै न्याय पाउनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन् । निर्मला पन्तको घटनामा अनुसन्धान गर्न जिल्लाका प्रहरीलाई माथिबाटै सहयोग नगर्न भनिएको परिवारले आरोप लगाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा निर्मलाका बुबाले बम दिदीबहिनीले सहयोग गर्नुपर्नेमा सान्त्वनासमेत नदिएको बताए । यज्ञराजले निर्मलाको बलात्कार र हत्या घटनामा प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्न गरेका गतिविधिको दृष्टान्त पेस गर्दै अहिलेसम्म उनीहरू खुला हिँडिरहेको प्रति आश्चर्य जनाए । उनले निर्मला हराएकै दिन विभिन्न प्रहरी चौकीमा खबर गरे पनि प्रहरी नआइदिएको प्रहरी घटनास्थलमा जान तयार भए पनि एसपी डिल्लीराज विष्टले रोकिदिएको बताए । उनले बम दिदीबहिनीको घरमा प्रहरीले समेत आफूहरूलाई भित्र पस्न नदिएको बताए ।
यज्ञराजले प्रश्न गरे, ‘म नेपाली नागरिक हुँ कि होइन ?, शान्तिपूर्ण ढंगले कारबाही गर भन्दा गोली किन हानियो ?’ आफूहरूले छोरीका लागि न्याय मागेको बताए । प्रहरीले नै प्रमाण संरक्षण गर्नुको साटो मेटाएको देखिएकाले घटना केही समयपछि सामसुम हुने सन्देह गर्नु अस्वाभाविक होइन ।
निर्मला हत्याकाण्डको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेपछि सभामुखले सरकारलाई सदनमा जानकारी दिन आदेश दिएका छन् । विपक्षी दलका सदस्यले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेपछि सभामुखले सरकारलाई आदेश दिएका थिए । विपक्षी सांसदहरूले ‘दोषीलाई सरकारले संरक्षण गरेको’ आरोप लगाएका छन् । सायद यही कारणले प्रहरीले प्रमाण मेटाउने प्रयास गरेको हुनुपर्छ । निर्मलाको शव जलाउन हतार गर्ने मामा भनिएका व्यक्ति, घटनास्थलमा निर्मलाको शरीरबाट रगत र सम्भवतः वीर्य पखाल्ने महिला तथा मारिनुभन्दा पहिले निर्मला गएको घरका बासिन्दा र छरछिमेकीहरूसँग प्रहरीले राम्ररी सोधपुछ गरिएको भए त रहस्य पत्ता लाग्नुपर्ने हो ।
प्रहरीले पहिलेदेखि जेल बसेको मान्छे खोजेको भन्दै सही तवरले छलफल र अनुसन्धान नगरेको बताए ।
आफूलाई जबर्जस्ती किटानी दिन लगाएको पन्तले बताए । ‘मैले त्यहिबेला यो विषयमा प्रहरीलाई भन्दा उल्टै प्रहरीले थर्कायो, हामीलाई सीआईडी लगाएर हाम्रो फलो गरिएको छ,’ उनले भने । उनले आफ्नो घरमा प्रहरीले गरेजति खानतलासी अपराधीका घरमा गरेको भए अपराधी पत्ता लागि सक्ने बताए । ‘हामीले न्याय माग्दा कस्तो गल्ती ग¥यौं ?’ उनले प्रश्न गरे ।
फेरि सुरु भयो आन्दोलन
निर्मलाका हत्या घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सुरुवातबाटै आन्दोलनरत आमा समूह फेरि आन्दोलित बनेका छन् । निर्मला हत्याकाण्डको विरोधमा महिला दबाब समूहले बिहीबार सदरमुकाम महेन्द्रनगरको स्थानीय मदनचोकमा थाली बजाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।
महिला अधिकारकर्मी, स्थानीय र नेविसंघले चरणबद्ध आन्दोलन बिहीबारदेखि सुरु गरेको छ । सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई काम गर्न दिने भन्दै यसअघि आन्दोलन रोकिएको थियो । तत्काल अपराधी पत्ता नलाग्नु र प्रमाण नष्ट गर्नेमाथि कारबाही नहुनुले महेन्द्रनगरमा आक्रोश बढ्दै गइरहेको महिला दबाब समूहकी संयोजक हेलन श्रेष्ठले बताइन् । प्रदर्शनमा स्थानीय महिलाहरू खाना खाने थाल र चम्चासहित सडकमा उत्रेका छन् । दबाब समूहले स्थानीय मदनचोकमा धर्ना दिएका छन् ।
समितिले समेत तोकिएको म्यादसम्म सत्यतथ्य बाहिर नल्याउनु र अहिलेसम्म हत्यारा सार्वजनिक हुन नसकेपछि पुनः दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिएको समितिकी संयोजक श्रेष्ठले बताइन् ।
‘निर्मलाका हत्यारा पक्राउ र निर्मलाले न्याय पाउनुपर्ने हाम्रो सुरुदेखिको माग हो, ‘माग पूरा नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ,’ उनले भनिन् ।
यथाशीघ्र निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्नुपर्ने, दिलीपसिंह विष्टलाई फसाउन खोज्ने अनुसन्धान अधिकृत र आन्दोलनका क्रममा गोली हान्ने प्रहरीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको बताए ।
नेविसंघ कञ्चनपुरले ३० भदौसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
नेविसंघले प्रधानमन्त्रीले निर्मला हत्याबारे दिएको अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्ने, घाइतेहरूको उपचारमा ध्यान दिइनुपर्ने, दिलीपसिंह विष्टलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका मागसमेत राखेको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी निर्मला गत १० साउनदेखि बेपत्ता भएकी थिइन् । बेपत्ता भएकी उनको शव भोलिपल्ट गाउँनजिकैको उखुबारीमा नग्न अवस्थामा भेटिएको थियो ।